Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana India » Nosoniavina ny fifanarahana fizahan-tany momba ny fizahantany any India sy Alemana
Associations News • Vaovao Mafana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana Alemana • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao Mafana India • Vaovao • fanorenana • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao isan-karazany
Vita sonia ny fifanarahana fizahan-tany momba ny fizahan-tany roa sy India
India sy Alemana dia nanao sonia fifanarahana fizahan-tany momba ny fizahan-tany amin'ny alàlan'ny Association Association of Tour Operations (IATO) sy ny Deutscher Reiseverband eV, (DRV) Association Travel German mba hampiroborobo ny fizahan-tany roa tonta eo amin'ny firenena roa tonta amin'ny alàlan'ny fandraisana fepetra mety hamerenana ny fizahantany raha vao misy ny tranga. ara-dalàna hoy Andriamatoa Rajiv Mehra filohan'ny IATO.
IATO sy DRV dia nanaiky hanao ezaka mitombina hampahafantarana ireo mpikambana ao aminy fa mpikambana ao amin'ny fikambanana roa, ny tombony azo avy aminy ary ny hetsika any India sy Alemana.
Ireo fikambanana roa ireo dia samy hanao programa fifanakalozana dia lavitra sy programa fampiofanana.
Ny fanaovan-tsonia ity fifanarahana ity dia handefa hafatra any amin'ny firenena hafa any Eropa ihany koa fa vonona handray ireo mpizahatany vahiny rehetra i India.
Nisy fifanarahana fiaraha-miasa nifamaly nifanaovan'i Atoa Norbert Fiebig, filoham-pirenena - Deutscher Reiseverband eV, Fikambanana Mpitsangatsangana Alemanina, ary Andriamatoa Rajiv Mehra, filoham-pirenena, Fikambanan'ny mpikarakara fizahan-tany indiana mba hampandroso izany.
Ao anatin'ity fifanarahana ity, ny IATO sy ny DRV dia samy nanaiky ny hanao ezaka mitombina hampahafantarana ireo mpikambana ao aminy fa mpikambana ao amin'ny fikambanana sy ny tombontsoa ary ny hetsika ao India ary Alemana. Ny tompon'andraikitra amin'ny fikambanana roa tonta dia hasaina hanatrika ireo fivoriambe fanaon'izy ireo isan-taona ary hanao programa fifanakalozana dia lavitra sy fandaharam-pampiofanana hatrany.
Alemana dia iray amin'ireo tsena lehibe ahazoana fizahan-tany miditra any India, ary izany dia hanampy amin'ny famelomana indray ny fizahan-tany miditra any India ary hanampy ireo mpandraharaha mpizahatany ivelany avy any Alemana hamerina hamerina hamidy ireo fonosana India.
Ny fifanarahana natao teo amin'ny DRV sy IATO dia tsy vohana fotsiny Mpikambana IATO hifandray amin'ireo mpikambana DRV fa handefa hafatra any amin'ny firenena hafa any Eropa ihany koa fa vonona handray ireo mpizahatany vahiny rehetra i India raha averina indray ny visa e-Tourista sy ny sidina iraisam-pirenena.
India sy Alemana dia manana tantara lava miaraka. India dia ampahany tamin'ny satro-boninahitry ny Britanika nandritra ny Ady Lehibe Faharoa, ary tamin'izany fotoana izany, ny Tafika Indiana Britanika dia nasaina hanome anjara biriky amin'ny ezaka ady amin'ny Allied, anisan'izany ny Western Front. Ireo mpikatroka mpomba ny fahaleovan-tena ao anatin'ny tafika mpanjanatany dia nangataka fanampiana alemana tamin'ny fahazoana ny fahafahan'i India, ka nahatonga ny fikomiana Hindoa – Alemanina nandritra ny Ady lehibe I. Avy eo nandritra ny Ady Lehibe Faharoa, ny ezaka ady nataon'ny Mpiray dina dia nanetsika miaramila an-tsitrapo 2.5 tapitrisa avy any India India.
Ny Repoblikan'i India vao niforona dia iray amin'ireo firenena voalohany namarana ny Fanjakana Ady tamin'i Alemana taorian'ny Ady Lehibe Faharoa ary tsy nitaky fanamboarana ady avy tany Alemana na dia miaramila 24,000 izay miasa ao amin'ny Tafika Indiana Britanika aza no maty tamin'ny fampielezana ady tany Alemana Alemana. .
India dia nitana fifandraisana diplomatika niaraka tamin'i Alemana Andrefana sy Alemana Atsinanana ary nanohana ny fampiraisana azy ireo tamin'ny 1990.
Chancelier Alemanina Merkel ary ny praiminisitra India Modi
Amin'ny vanim-potoana maoderina kokoa, ny masoivohon'i Alemana Angela Merkel dia nanao fitsidihana ofisialy marobe tany India ka nahatonga ny fanaovan-tsonia fifanarahana marobe nanitatra ny fiaraha-miasa roa tonta, ary ny volana novambra 2019 lasa teo dia fifanarahana 17 nifanaovan'i India sy Alemana.